यातायात - Best of Japan
Shinkansen जापानी द्वीपसमूह को विभिन्न भागहरु मा संचालित छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका ट्रेनहरू छन्, नयाँ मोडेलदेखि "डाक्टर पहेलो" सम्म, जुन ट्र्याकहरू जाँच गर्दछ। Shinkansen समय मा ठ्याक्कै चल्छ। त्यसोभए किन यसलाई तपाईंको यात्रामा प्रयोग नगर्ने? जापानभरि शिink्कन्सेनको बारेमा कृपया तलको लेख हेर्नुहोस्। शिन्कानसेन जापानका फोटोहरू शिink्कनसेनले जापानका विभिन्न भागहरूलाई सहि समयमा जोड्दछन् शिन्कानसेनले जापानका विभिन्न भागहरू सही समयमा जोड्दछ शिन्कानसेन जापानमा शिन्कानसेन जापानमा शिन्कानसेनले जापानको विभिन्न भागहरू सही समयमा जोड्दछन् शिन्कानसेन र माउन्टफुजी = एडोबस्टक द शिन्कानसेन जापानको विभिन्न भागहरुलाई सहि समयमा जोड्छ शि Sh्कनसेनले जापानको विभिन्न भागहरुलाई सहि समयमा जोड्छ शि Sh्कनसेन जापानको बिभिन्न भागहरु लाई सही समयमा जोड्छ शिन्कानसेन जापानको बिभिन्न भागहरु लाई सही समयमा जोड्दछ सही समयमा जापानका विभिन्न भागहरू जोड्दछ म अन्तको लागि पढिरहेकोमा तपाईलाई कदर गर्छु। "Shinkansen" मा फिर्ता
नयाँ Chitose एयरपोर्ट होक्काइडोको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। यो लगभग minutes० मिनेटको दूरीमा जेआर एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा सप्पोरो शहर केन्द्रबाट छ। यो एयरपोर्टसँग अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल र घरेलु टर्मिनलहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोमा सप्पोरो, निसेको, ओटारु इत्यादिको वरिपरि यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले नयाँ Chitose एयरपोर्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। यस पृष्ठमा, म नयाँ Chitose एयरपोर्टको विवरण प्रस्तुत गर्दछु। म नयाँ Chitose एयरपोर्ट को रूपरेखा पहिले परिचय गर्दछु, त्यसपछि, म विदेशबाट धेरै पाहुनाहरु के जान्न चाहान्छु व्यक्तिगत रूपमा वर्णन गर्नेछु। नयाँ Chitose एयरपोर्ट, होक्काइडो = शटरस्टकमा एएनएको विमानमा ओर्लिएका सारांश मर्मतका कामदारहरू = शटरस्टक अलग पृष्ठमा Google नक्सा प्रदर्शन गर्न क्लिक गर्नुहोस् नयाँ Chitose एयरपोर्टसँग आन्तरिक उडानहरू बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलहरू छन्। त्यहाँ एयरपोर्टमा JR नयाँ Chitose एयरपोर्ट स्टेशन छ, यो साप्पोरोमा राम्रो पहुँच हो। एयरपोर्टमा भाडा कार कम्पनीहरूको काउन्टरहरू छन्। उनीहरूसँग काउन्टरमा एउटा रिसेप्शन डेस्क छ र पार्किंगमा नि: शुल्क बस। यदि तपाईं मिनामी चितोज स्टेशनमा जानुहुन्छ जुन जेआर न्यू चिटोज एयरपोर्ट स्टेशनबाट अगाडि एक स्टेसन हो तपाईं कुशिरो, ओबिहिरो इत्यादि जाने जेआर एक्सप्रेस ट्रेनमा पनि सवारी गर्न सक्नुहुनेछ। जेआर एक्सप्रेस ट्रेनबाट 40० मिनेटसम्म निसेकोमा २ घण्टा गाडीमा जान सकिन्छ। , २ घण्टा minutes० मिनेट - hours घण्टा minutes० मिनेट बस द्वारा (स्की रिसोर्टमा निर्भर गर्दै) अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू न्यू Chitose एयरपोर्टमा, निर्धारित उडानहरू तलका विमानस्थलहरूको साथ सञ्चालन हुन्छन्। बैkकक (डन मुआANG्ग), हANG्झाउ
जब तपाईं जापान जानुहुन्छ तपाईंसँग ओसाकामा एयरपोर्ट टोकियोको एयरपोर्टको अलावा प्रयोग गर्ने विकल्प हुन्छ। ओसाकासँग "कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट" छ जुन २ hours घण्टा अपरेट गर्दछ। यस पृष्ठमा, म यस एयरपोर्टको रूपरेखा र यस एयरपोर्टबाट क्योटो, ओसाका आदिको बारेमा कसरी जान्ने भनेर परिचय दिनेछु। कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपरेखा (KIX) कन्साई ईन्टरनल एयरपोर्ट वा KIX जापानको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो, ओसाका शहर नजिकै अवस्थित = शटरस्टक कृत्रिम टापुमा अवस्थित छ, ओसाका प्रान्तको दक्षिणी भागमा km किलोमिटर अपतटीय। यो अर्को साइडमा 24..2 किलोमिटर लम्बाइको पूलबाट जोडिएको छ। सडकहरू र रेलमार्गहरू यस पुलबाट भएर सर्छन्। यो ओसाका स्टेशनबाट लगभग kilometers० किलोमिटर टाढा छ। कन्साइ एयरपोर्ट र ओसाका शहर बीच, JR र Nankai ट्रेन संचालित छन्। कन्साइ एयरपोर्टमा त्यहाँ दुईवटा टर्मिनल भवनहरू छन्। टर्मिनल १ बाट तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र नियमित एयरलाइन्सको घरेलू उडानहरूमा बोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। टर्मिनल २ बाट तपाईं LCC अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र घरेलू उडानहरू बोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि केहि LCC हरू टर्मिनल १ बाट आउँछन् र प्रस्थान गर्छन्। टर्मिनल २ टर्मिनल १ भन्दा धेरै असुविधाजनक छ, त्यसैले यदि तपाइँ LCC प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि LCC छ जुन टर्मिनल १ बाट छुट्छ। Kansai एयरपोर्ट वा Itami एयरपोर्ट? ओसाकामा कन्साइ एयरपोर्ट र इटामी एयरपोर्ट छन्। यी मध्ये कुन राम्रो प्रयोग गर्नु पर्छ? कन्साइ एयरपोर्ट> ...
नरिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जापानको टोकियोको हनेडा एयरपोर्ट पछाडि दोस्रो सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। हनिडा एयरपोर्टको साथ नारीता एयरपोर्ट टोकियो मेट्रोपोलिटन हब एयरपोर्टको रूपमा पूर्ण रूपमा परिचालनमा छ। यदि तपाईं टोकियो मा यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईं यी एयरपोर्टहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यस पृष्ठमा, म नरिता एयरपोर्टको बारेमा परिचय दिनेछु। नरिता एयरपोर्ट टोक्यो शहरको केन्द्रबाट धेरै टाढा छ, कृपया टोक्यो केन्द्रमा पहुँच जाँच गर्नुहोस्। नरिता एयरपोर्ट वा हनेडा एयरपोर्ट? टोकियो नरिता एयरपोर्ट (NRT) मा जापान एयरलाइन्स (JL) बाट विमानहरू। नरिता जापान एयरलाइन्स (जेएल) र सबै निप्पोन एयरलाइन्स एएनए (एनएच) = शटरस्टक अन्तर्राष्ट्रिय उडान र एलसीसी बेसको लागि एक केन्द्र हो टोक्यो मेट्रोपोलिसको हनेडा एयरपोर्ट दक्षिणपश्चिम टोकियोमा रहेको छ र चिली प्रान्तको नरिता एयरपोर्ट हो। त्यहाँ केवल हनेडा एयरपोर्ट मात्र हुन्थ्यो, तर १ 1960 s० को दशकमा जापानको आर्थिक विकास भयो र विमानका यात्रुहरूको संख्या द्रुत रूपमा बढ्यो। यस कारणले गर्दा, हनेडा एयरपोर्ट एक्लैले बढ्दो मागको सामना गर्न सकेन, र १ 1978 60 मा नरिता एयरपोर्ट खोलियो। टोकियोको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नरीता एयरपोर्टमा सारियो र हनेडा एयरपोर्टलाई घरेलु उडानका लागि एयरपोर्टको रूपमा लिइयो। जहाँसम्म, नरिता एयरपोर्ट टोक्योको सहरबाट XNUMX० किलोमिटर टाढा सीधा रेखा दूरीमा पनि छ। यो टोकियो मेट्रोपोलिसको हब एयरपोर्टको रूपमा धेरै टाढा छ। यस बीच, हनेडा एयरपोर्टमा, त्यहाँ उल्लेखनीय विस्तार भएको छ। हनेडाबाट आइपुग्ने र प्रस्थान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अब सञ्चालन भइरहेको छ। हनेडा एयरपोर्टमा एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन खोलियो। LCC उडानहरू ...
जापान मा, Shinkansen (बुलेट ट्रेन) को नेटवर्क फैलदै छ। शिन्कानसेन एक सुपर एक्सप्रेस हो जुन २०० किमि प्रति घण्टा भन्दा बढी छ। यदि तपाईं शिink्कन्सेन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं जापानको प्रमुख शहरहरू बीच एकदमै छिटो सरुवा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं हवाइजहाज प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले एयरपोर्टबाट जानु पर्छ, त्यसैले यो आश्चर्यमा समय लिन्छ। यसको विपरित, Shinkansen प्रमुख स्टेशनहरू बीच यात्रा, ताकि तपाईं धेरै कुशलतापूर्वक यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं जापान मा Shinkansen सवारी आनन्द गर्नुपर्छ! शिink्कनसेन नेटवर्कको रूपरेखा छवि क्लिक गर्दा जापान रेल पासको आधिकारिक वेबसाइटमा यस शिink्कनसेन नक्शा छुट्टै पृष्ठमा देखा पर्नेछ शिन्कानसेन टिकट बुकिंग र खरीद कसरी गर्ने सिक्केन्सेन टिकट आरक्षण र खरीद प्रक्रियाहरूको सन्दर्भमा, मैले निम्न लेखमा यसका विवरणहरू प्रस्तुत गर्‍यो। जापान रेल पास सहित, कृपया विस्तृत जानकारीका लागि यस लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। Nozomi, Hikari, Kodama ... कति फरक छ? शिन्कानसेन नेटवर्कमा एक लामो मार्ग छ जुन जापानी टापुमा प्रवेश गर्दछ र यसबाट धेरै शाखाहरू छिर्दछन्। शिन्कानसेन मार्गहरूमा, त्यहाँ रेलहरू छन् जुन केवल प्रमुख स्टेशनहरू र ट्रेनहरूमा रोकिन्छ जुन प्रत्येक स्टेशनमा रोकिन्छन्। उदाहरण को लागी, टोकियो र ओसाका जोड्ने Tokai Shinkansen मा, त्यहाँ "Nozomi" "Hikari" केवल प्रमुख स्टेशनहरु मा र प्रत्येक स्टेशन मा "Kodama" रोकिन्छ। प्रत्येक रेल, सवारी साधनहरुमा लगभग उस्तै। जे होस्, रोक्न स्टेशनहरूको संख्या फरक छ, आवश्यक समय फरक हुनेछ। टोकैडो शिन्कानसेन मा प्रत्येक रोकिन्छ। Nozomi स्टक स्टेशन को साथसाथ, Hikari केही स्टेशनहरु मा रोकिन्छ। कुन स्टेशन हिकारी स्टपमा निर्भर गर्दछ ...
हनेडा एयरपोर्ट टोकियो मेट्रोपोलिसको हब एयरपोर्ट हो। तपाईं जापान यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ एक अन्तर्राष्ट्रिय उडान द्वारा र हनेडा एयरपोर्टबाट प्रस्थान गर्दै। र तपाई हनेडा एयरपोर्ट प्रयोग गरी जापानको वरिपरि यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए यस पृष्ठमा म तपाईंलाई हनेडा एयरपोर्टको बारेमा उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु। हनेडा एयरपोर्ट वा नरिता एयरपोर्ट? हनेडा एयरपोर्ट टोपियो केन्द्रको निकट नजिक छ नरिटा एयरपोर्ट भन्दा यात्रुहरू कतारमा उभिरहेका छन् र हनेडा एयरपोर्टको शटरस्टक आउटलाइन हनेडे एयरपोर्ट हनेदा एयरपोर्टको आधिकारिक नाम: टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट टोकियोको दक्षिणपश्चिमी भागमा जापानको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। यो टोक्यो शहरको केन्द्रबाट १ 18 किलोमिटर टाढा छ। यो लगभग -०-30० मिनेट ट्रेन वा कार द्वारा हनेडा एयरपोर्टबाट टोकियो स्टेशनसम्म छ। हनेडा एयरपोर्ट, नरिता एयरपोर्ट (चिबा प्रान्त) सँगै, टोकियो मेट्रोपोलिसको हब एयरपोर्टको रूपमा भूमिका खेल्दछ। अहिले सम्म नरिता एयरपोर्ट एक एयरपोर्टको रूपमा विकसित भएको छ जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आइपुग्छन् र प्रस्थान गर्छन्। अर्कोतर्फ, हनेडा एयरपोर्ट पूर्ण रूपमा एयरपोर्टको रूपमा सञ्चालन गरिएको छ जहाँ घरेलु उडानहरू आउँछन् र छुट्छन्। यद्यपि हालसालै हनेडा एयरपोर्ट धेरै विस्तार भएको छ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन खोलियो। यस तरिकाले, हनेडा एयरपोर्टले विशाल एयरपोर्टको रूपमा विकास गर्न शुरू गरिसकेको छ कि केवल घरेलु उडानहरू मात्र होईन तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि आउँछन् र छुट्छन्। हनेडा एयरपोर्टमा तीन यात्री टर्मिनल भवनहरू छन्। एउटा घरेलु लाइन टर्मिनल भवन हो। बाँकी दुई घरेलू टर्मिनल भवनहरू छन्। यी टर्मिनल भवनहरू नि: शुल्क बसले जडान गरेको छ। >> को आधिकारिक वेबसाइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ...